Iincwadi ezinconyelwayo zokuwa: Izihloko eziseshushu | Uncwadi lwangoku
Ekwindla kunye namagqabi ayo afileyo
Ixesha lamagqabi asasazeke ezindleleni lifikile kwaye iwebhu igcwele kukukhangelwa okunxulumene "neencwadi ezinconyelweyo zokuwa". Ukucinga ngabafundi abazimiseleyo abafuna ukuntywilisela kumabali amnandi, kuye kwenziwa ukhetho olunobunkunkqele lweencwadi ezingafanelekanga ukuba ziphoswe nakweyiphi na ingqokelela kwaye ziya kuhamba ngokugqibeleleyo kwiinyanga ezikhokelela ebusika.
Apha uya kufumana kwimisebenzi ebangele isiphithiphithi ngo-2021, ukuya kuthi ga kugcinwe ngokuhamba kwexesha ngenxa yoyilo lwabo olubalaseleyo kunye nokucwangciswa. Izihloko njani Umgca womlilo (Ngo-2020), nguArturo Pérez Reverte; Isiqingatha sokumkani (ULwandle Olwaphukileyo I, 2020) nguJoe Abercrombie o Ukumkanikazi Olubomvu (2018), nguJuan Gómez-Jurado, ukubiza ngambalwa.
1 Ezinzulwini zobusuku (2021)
2 Isiqingatha seKumkani (2014)
5 Umgca woMlilo (2020)
6 Ukuhlawulelwa (2020)
7 Ndlovukazi ebomvu (2018)
Ezinzulwini zobusuku (2021)
Yileveli yokugqibela yiSpanish Mikel Santiago; yapapashwa ngoJuni 2021. Kwakhona umbhali uveza ibali eliyimfihlakalo elibekwe kwidolophu yase-Illumbe eyintsomi, ekwiLizwe laseBasque. Iyelenqe liyaqhubeka phakathi kobumnyama obudlulileyo kunye nomsitho ongasindi kwiziphumo zala maxesha obumnyama.
NgoMgqibelo nge-16 ka-Okthobha u-1999 yayingumdlalo wokugqibela we-rock band iLos Deabruak - iqela lika-Diego Letamendia kunye nabahlobo bakhe. Obo busuku baphawulwa sisiganeko esitshintshe ikamva lomntu wonke: Lorea Intombi kaDiego— Wanyamalala. Ngaphandle kwenkqubo yophando yamapolisa, akukho mkhondo wendlela la mfazi uselula wafunyanwa.
Kwiminyaka engamashumi amabini kamva, UDiego Leon -Ngubani owalandela ikhondo lakhe lokudlala yedwa- Buyela eIlumbe. Isizathu sokubuya sithi Ukuvalelisa uBert, umhlobo wakudala (owayesakuba lilungu leqelaosweleke emlilweni owoyikekayo.
Emva komngcwabo, phakathi kwencoko yabazana, urhano luyavela mhlawumbi into eyenzekileyo ibiyinjongo. Oku, kuphakamisa izinto ezininzi ezingaziwayo, kwaye enye yezona zinto zoyikisayo kukuba ukubhubha kukaBert kunxulunyaniswa nokunyamalala kukaLorea ...
Ezinzulwini zobusuku (iTrilogy...
Ngumdlalo omnandi obhalwe nguJoe Abercrombie -Oku kuqalisa i-trilogy Ulwandle Oluqhekekileyo—. Inguqulelo yayo yoqobo yapapashwa kwi-2014, ngelixa inguqulelo yayo yeSpanish yaziswa kunyaka olandelayo. Imbali yenzeka eThorlby kwaye ijikeleze ulawulo lwe-Gettland.
Ebukumkanini bamadoda angamagorha, Yarvi Unyana wesibini kaKumkani u-Uthrik uye wabandezeleka ngenxa yokugatywa bonke ubomi bakhe yi unayo deformation esandleni sakho. Ukukhubazeka kwakhe emzimbeni kuyamkhuthaza ukuba aqeqeshe njengenkonzo, ukuze abe yinxalenye yabefundisi. Kodwa wonke umfanekiso uyatshintsha xa utata wakhe nomntakwabo bebulawa. Ekuvukeni kweso siganeko sibuhlungu, uYarvi kufuneka uthathe isihlalo sobukhosi.
El Ukumkani omncinci kwaye ongenamava kufuneka athathe uxanduva olukhulu kwindawo enoburharha nengabhadlanga, ilawulwa ngenkohlakalo nokungcatshwa-okwenza kube nzima ukuba namahlakani. Kule panorama inzima (ephawulwe kwaye isikelwe umda kukukhubazeka kwakhe), iYarvi kufuneka idibanise ulwazi lwayo ukuze iphumelele kwidabi ngalinye.
Isiqingatha sokumkani (Ulwandle ...
Umbhali owaziwayo waseNew York uKass Morgan usizisela ibali elinika umdla emva kokubhengezwa apho ebonisa kakubi ubuntu. Kule dystopia - isibonelelo esiqhelekileyo kumabali akhe -, Abali-100 abagxothiweyo bakhethelwe ukujonga ukuba umhlaba ukulungele na ukuhlala abantu kwakhona
Umhlaba wabandezeleka yimfazwe yenyukliya etshabalalise uninzi lwabantu. Iminyaka, Abasindileyo baxhomekeke kwiinqanawa ezibhabha emajukujukwini Ngaphezulu komaleko oyityhefu ejikeleze iplanethi. Ngenxa yokwanda kwenani labasebenzi, imeko ifikelela kumda: izibonelelo ziphelile kwaye, ke, ubudlelwane buxinekile.
Abalawuli banquma ukuthumela iqela lokuhlola ukujonga imeko yoMhlaba kwaye ukuba kuyenzeka ukuba uhlale kwakhona. Njengokucoca kunye nokuthintela ilahleko "ebalulekileyo" kubemi, le mishini yabelwe I-100 yolutsha olufikisayo. Emva kokwehla okunzima, ulutsha luzifumana lukwindawo yasendle kodwa intle ngokwenene, indawo apho ukongeza kulungelelwaniso, kufuneka bafunde ukuhlala kunye ukuba banqwenela ukusinda.
I-100 (i-100 1)
Emva kokungabikho kweminyaka eli-13 kuhlobo loncwadi oluqinisekileyo- emva kokupapashwa UHarry Potter kunye neeHallows ezibulalayo ngo-2007-, uJK Rowling ubuya nebali elitsha. Kulo mdlalo, Umbhali ophumelele amabhaso usisa abafundi bakhe kumazwe aseCornucopia Apho ke uzobe iyelenqe elijikeleza "inyani kunye nokusetyenziswa gwenxa kwamandla" - ngokukaRowling ngokwakhe.
Yonke into yayiyintabalala kunye nolonwabo kubukumkani baseCornucopia. Inkokeli yayo yayiyinkosi elungileyo kwaye ithandwa ngabo bonke kwaye abemi bayo babemi ngaphandle ngenxa yezandla zabo ezibalaseleyo; Baye benza izidlo ezimnandi ezazizalisa uvuyo kwabo bangabemi kunye neendwendwe.
Nangona kunjalo,, Kukude apho, kwimigxobhozo esemantla ebukumkanini, imeko yahlukile. Ngokwentsomi esetyenziselwa ukoyikisa abantwana, irhamncwa lakudala eligama linguIckabog lalinabantu abahlala kwezo ndawo zimbi. Ngoku, iyelenqe liqhubeka ngokungalindelekanga xa into ekufanele ukuba yintsomi iqala ukuzaliseka ...
I-ickabog (Salamander ...
Umgca womlilo (2020)
Yincwadi yokugqibela yomlobi UArturo Pérez Reverte. Ihlawula bonke abo balwa kwaye banikela ngobomi babo kwiMfazwe yamakhaya yaseSpain. Umbhali wenze umsebenzi oqaqambileyo obonakala kwindlela akwazi ngayo ukudibanisa intsomi kunye namaxwebhu obunyani obunyani. kwenzeka ngelo xesha libalaseleyo. Hayi kulilize umsebenzi ufumene ibhaso labagxeki kwakuloo nyaka wokupapashwa kwawo.
Konke kuqala ngobusuku buka NgeCawa, ngoJulayi 24, 1938 xa amawaka amajoni amatsha ayokuma eCastellets YeSegre. Amadoda nabafazi babengabakwaXI Mixed Bridada boMkhosi weRiphabliki. Ngosuku olulandelayo lwaqala Olunye lolona dibana lunegazi kumhlaba waseSpain: Idabi le-Ebro.
Yincwadi yolwaphulo-mthetho ebhalwe yiSpanish uFernando Gamboa. Isakhiwo sidibanisa imicimbi yokwenyani kunye neziphumo zazo kwikamva eliyintsomi ngo-2028. Ibali lisetelwe e-Barcelona kwaye liqala nge-17 ka-Agasti ka-2017, kanye xa uhlaselo lwabanqolobi lwenzeka eLas Ramblas -Inyani eshiye ngaphezulu kwe-15 yokufa kunye nenqwaba yabonzakeleyo.
Ngenye imva kwemini ngo-Agasti iveni yathumela iqela labantu eLas Ramblas eBarcelona. Iimitha ezimbalwa ukusuka Kukho uNuria Badal omncinci, i-WHO, phakathi kokukhala kunye nokudideka, Uyaqonda ukuba angaziphepha zonke izinto ezenzekileyo. Ukungathathi isigqibo esifanelekileyo ngexesha, kuphele ngeziphumo ezibi eziya kutshintsha ubomi bakhe nekamva lelizwe.
Kwiminyaka elishumi elinanye kamva UNuria uye waba lipolisa ye-Barcelona engazinzanga. Izenzo zorhwaphilizo, zokufudukela kwelinye ilizwe, ezopolitiko ezinobundlongondlongo kunye nobunqolobi busiguqule isixeko. Emva kokudlula kwimeko eyothusayo, ubomi beli bhinqa liselula buza kuthatha ithuba elingenakuthelekiswa nanto. Ukusuka apho kuya kufuneka ajongane neendlela ezininzi ukuze asindise ubomi bakhe kunye nesizwe siphela.
INKULULEKO: Inoveli ...
Yiyo Thriller ibhalwe yiSpanish UJuan Gómez-Jurado. Ngale noveli umbhali uqala i-trilogy malunga nokuzonwabisa kuka-Antonia Scott. Iyelenqe lisetelwe eMadrid Kwaye kuyinkwenkwezi umfazi oqondayo osombulule ulwaphulo-mthetho olubalulekileyo ngaphandle kokuba lipolisa.
UAntonia scott Uyimbacu ekhayeni lakhe eLavapiés emva kwesiganeko sosapho esimjike sazimela. Umhloli ufika kuloo ndawo UJon Gutierrez; Injongo yakhe kukuba iarhente yamkele ityala elitsha eMadrid. Emva kothethathethwano kunye nokufumana imvume, bobabini Bangena kuphando luzele ziimfihlelo, amaxhoba azizityebi kunye neelebhu zemfihlakalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Iincwadi ezikhuthazwayo zokuwa